गुगल पोडकास्ट अब कारप्ले | को साथ उपयुक्त छ आईफोन समाचार
एप्पल सेवाहरू मध्ये एक जुन भर्खरको समयमा सब भन्दा सुधार भएको हो CarPlay, सेवा जुन हामी आफ्नो कार मल्टिमिडीया प्रणालीबाट हाम्रो आईफोन नियन्त्रण गर्न सक्दछौं। एक सेवा जसले हामीलाई हाम्रा उपकरण बारे सचेत हुन बिर्स्न अनुमति दिन्छ जब यो चार्ज भइरहेको छ (धेरै जसो वायर्ड प्रणालीहरूमा), हामीसँग हाम्रो संगीत र हाम्रो अनुप्रयोगहरूको ठूलो अंश पहुँच गर्न सक्दछ। भन्नु पर्दैन, हामीले अझै सतर्कता अपनाउनुपर्दछ, र धेरै देशहरूमा गाडी ड्राइभ चलाउँदा कार प्ले चलाउन पनि निषेध गरिएको छ। त्यहाँ धेरै अनुप्रयोगहरू छन् जुन हालसालै CarPlay मा अनुकूलित गरिएको छ: गुगल पोडकास्ट। हामी अब गुगल पोडकास्ट सेवा CarPlay को साथ हाम्रो कार बाट प्रयोग गर्न सक्छौं।
गुगल पोडकास्ट यसरी कारप्लेमा उपलब्ध अन्य पोडकास्ट अनुप्रयोगहरूमा सामेल हुन्छ, एप्पलको आफ्नै पोडकास्ट जस्ता अनुप्रयोगहरू, वा पोडकास्ट बजारमा नेता बन्ने आफ्नो इच्छाको साथ Spotify। एक नि: शुल्क अनुप्रयोग जुन यस अवस्थामा हामीलाई हाम्रो मनपर्ने पोडकास्टहरू सुन्न, हाम्रो पोखरी नयाँ पोडकास्टहरू अन्वेषण गर्न, वा पोडकास्टहरूमा सुन्ने सबैको सूची ब्राउज गर्न अनुमति दिन्छ। सबै भन्दा राम्रो त्यो हो गुगल पोडकास्टसँग गुगल खोजी ईन्जिन छ, र हामी पहिलेदेखि नै थाहा पाउँदछौं कि यो कति टाढा जान्छ। हामीले तपाईलाई भनेको छुं, यस भर्खरको अपडेटको साथ हामीसँग एप्पल कारप्लेलाई धन्यवाद कार पोडमा गुगल पोडकास्ट प्रयोग गर्ने सम्भावना हुनेछ, ताकि हामी गर्न सक्दछौं। ड्राइभिंग गर्दा सजिलो र सुरक्षित तरिकामा हाम्रो मनपर्ने पोडकास्टहरू सुन्नुहोस्.
एक नयाँ नवीनता जुन नयाँ समयलाई अनुकूलन गर्न गुगलको रुचिलाई दर्साउँदछ, र बिस्तारै एप्पल इकोसिस्टमको सबै सम्भावनाहरू थप्दै। अन्तमा अधिक प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्छन् उनीहरूको लागि उत्तम, र विशेष गरी प्रतिस्पर्धाको इकोसिस्टममा रहेको। र तपाईं, कुन पोडकास्ट अनुप्रयोग तपाईं आफ्नो दिन प्रति दिन प्रयोग गर्नुहुन्छ? तपाइँको CarPlay को लागी मनपर्ने पोडकास्ट अनुप्रयोग के हो?
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन अनुप्रयोगहरू » गुगल पोडकास्टले अब कारप्लेलाई समर्थन गर्दछ
अस्टिनमा एप्पलको नयाँ क्याम्पसमा १ 192 २ कोठाको होटल हुनेछ